Vulgarity, nge ncazelo izichazamazwi - into ezimbi, kunganambitheki, inhlamba, yimikhuba. Ezinsukwini EGrisi naseRoma lasendulo, igama elithi "vulgaris" lalisho ukuthi "i ezingabizi, nsuku zonke, jikelele, kulula." Inani engakhi leli gama sitholwa kuphela emva kwempi eFrance lapho aristocrats babiza loko epithet nje uvele ekilasini wobunxiwankulu, kabani abamele wazama ukuthola udumo efanayo kanye nenhlonipho njengoba abameleli abavelele emphakathini, kodwa ngokungafani kwamadoda asebukhosini, abazange banolwazi, imfundo amasiko esivela ebukhosini kweqiniso.
Kuze kube manje, igama elithi "vulgarity" akalilahlile linikeza umqondo walo omubi, kodwa izibonakaliso zezikhathi vulgarity sashintsha ngokuphawulekayo. Ngaphezu kwalokho, umqondo waqala baxhumanisa lokho abesifazane.
Izimpawu vulgarity. ezinkulu amaphutha Abesifazane abayisikhombisa
Empumalanga, abesifazane esikhanya kakhulu babephakathi kwabantu we ephansi kwezakhi yezenhlalakahle abangenalo izindinganiso zokuziphatha nezingokomoya cabanga kwezithombe zabo Britni Spirs, Kim Kardashian, Rihanna.
Kuyaphawuleka ukuthi, ngokungafani kuya ngendlela Eastern yokucabanga, ezweni lethu, uma owesifazane ngendlela engahlanzekile noma inkanuko, akusho lutho. Kungakhathaliseki ke wayegqoké kanjani, kungaba othembekile, umama onothando futhi uchwepheshe ezinkulu. Ngokuvamile, ukungafani emhlabeni kwangaphakathi futhi ukubukeka yangaphandle yowesifazane kwenzeka ngenxa yokuthi akuyona uyazi degree of vulgarity zabo, uma sicabangela ukuthi ubukeka zikanokusho, cheeky, ocebile.
Yisifiso njengoba ngokucace ngangokunokwenzeka futhi ngokweyisa okwaholela ukuthi vulgarity livele ngendlela efanayo nelithi ubuhle.
I licace, ngcono
Ngokusho abesifazane abaningi, ubuhle besifazane incike ukwakheka akhethwe kahle. Phela izimonyo - yindlela jikelele lapho ubulili fair indlela ukuze anqobe indoda lapho uqala nje ukubona naphakade anqande isifiso sokukhuluma nomuntu ewubuciko ezinjalo.
Umphumela kuzoncika kuphela kulokho isikhundla yena ayoyikhetha ekuphishekeleni ubuhle futhi sikhulise isithunzi zemvelo bese ufihle amaphutha noma ukubangela "lokulwa makeup" abameleli kungeminye yemisebenzi endala.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi alifaneleki akuyona kuphela esikhanya kakhulu, kodwa futhi ukwakheka okungalungile. Ukuze bangabheki engenangqondo ongawamukeli isimo "owesifazane inhlamba" lapho sichaza isimo ukugcizelela okufanele kwenziwe noma phambi noma phezu izindebe.
Ikakhulukazi kunganambitheki uyobheka elikhanyayo kusihlwa ukwakheka ekuseni noma ukuthatha iholidi, ngesikhathi usuku kungase kufaneleke yemicimbi kusihlwa.
abesifazane abaningi bakholelwa ukuthi yemvelo izinwele umbala sesifiphele kakhulu, grey, livamile. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi abanikazi izinwele enhle ezimhlophe, okuyinto Ibhekwa thunzi of "igundane" kweqiniso. Lokho ezimhloshana ivame ukubhekana zonke izinhlobo ucwaningo - ukugunda izinwele kanye Umbala ngemibala anobuthi: okuluhlaza okwesibhakabhaka, elikhanyayo obomvu, oluhlaza, imajenta, blue-black.
ubuhle zabesifazane - umqondo okuxekethile, ngoba othile uyobheka ezinhle ngempela futhi engavamile nge umbala izinwele, kodwa umuntu kufanele ucabange ukuze aqokomise ubuhle bemvelo imibala zabo besebenzisa ukudaya noma tinting. Phela, uyonika akhanye futhi kukhanya okunempilo ezithambile ukukhanya brown izinwele umbala.
izinzipho Artificial kanye eyelashes
iminyaka eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili edlule, izimfashini lwalulude, marigolds nemvelo. Ngakho amantombazane liye okhethweni amakhosi, okulimaza lovely izinzipho Lihle obukhulu amathiphu zabo anolaka, nayo spoilt enwetshiwe egqoke nail plate.
ukubukeka Ohlanzekile Nohlelekile owesifazane kuncike, okokuqala kunakho konke, kusuka manicure kahle obujwayelekile. Ngokuvamile nezipikili Lihle obuphelele ngokulinganisela classical noma isiFulentshi, isibonelo, isikwele noma okusaqanda. manicure Yemvelo - akuyona kuphela ephephile futhi evumelana ngokuya kwansuku, kodwa futhi nobuhle obukhona elimnandi futhi ekhangayo.
Bayanda wesimanje siphishekela eyelashes enempilo enhle aluhlaza aye ayisebenzisa kaningi ukwakha isevisi. Yiqiniso, ngamunye kufanele ukuswela zabo, ngakho ngokukhetha onguchwepheshe, abaningi bheka ngokuyinhloko ngentengo, abe anaka ephansi kangaka, kangcono, ngaphandle kokucabanga mayelana izinga material. Ukuhamba ngalendlela, ekugcineni, intombazane ayikwazi ukuthola cilia izinga, okubangela nomona abanye, futhi lapho ukunciphisa zonke imishayo crazy, futhi ezingavamile, iso ukuvuvukala okukloloda inkulumo nezintombi.
owesifazane oluyinhlamba ngenxa yokuntuleka zokunambitha yisifiso njengoba ngokucace ngangokunokwenzeka, sexier, asemahle futhi acebile, iye yakhetha ukusetshenziswa egqamile imvunulo ubucwebe kanye izesekeli okungalungile, kungakhathaliseki iziqeshana noma namacici ngamatshe ngendlela ephambene neyemvelo ezinkulu, esikhwameni emibalabala noma isikhafu ethusayo.
Isifiso ame phandle ukugqoka izesekeli elikhanyayo, akukho okubi ngalokho, okubaluleke - umuzwa Ingxenye. Ngokwesibonelo, esikhwameni multi anemibala ngokuphelele umphelelisi grey ehhovisi isudu isikhafu Flamboyant - boring ijazi elimnyama futhi kwenza isithombe ezithakazelisayo futhi ongasoze. Uma ufuna ukukhanya uku izingubo, amagugu okuhloba nezinye izinsimbi kulokhu kufanele kube silula futhi musa overload isithombe.
It ikuvumela ukuba muhle izingubo hhayi inhlamba nezinye izinsimbi, futhi umuzwa Ingxenye uma kukhethwa izingubo nezinto zokuhloba, kanye nekhono ukuhlanganisa imibala. owesifazane oluyinhlamba, bekholelwa ngokwabo ucansi, ufuna ukuba ingabonakala, bekude, ngakho endabeni yokukhetha izingubo zokugqoka nezinto zokuhloba baphile esimisweni "kangcono ngokushesha."
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela nenhlonipho kanye anolaka ukuziphatha
Uma intombazane ugwema vulgarity ukukhethwa izingubo, kodwa ngesihluku uzwakalise, usebenzisa inhlamba, namanje uyobheka inhlamba. Ukwehluleka ukuhambisana nemithetho yokuziphatha njengoba ukufaka, isibonelo, ukukhuluma ngomlomo wakho egcwele ngenkathi bedla, kokuphazamisa interlocutor, ukuthinta ngokweqile, ukunyakaza okungalungile, silly, amahlaya Corny, njll
Ezocansi noma vulgarity? Ngakho ezifanayo futhi kokubili imibono ehlukene.
touch Innocent ukuba indoda ngesikhathi ingxoxo, inkulumo okubeka obala indaba ephathwayo, izwi languid nohleko akuyona inkomba kwezocansi. Ukuziphatha okunjalo seningi amadoda ibheka inhlamba nje kuphela, kodwa futhi ukuze levity futhi frivolity.
owesifazane oluyinhlamba, ngokubona amadoda - ke kodwa ngowesifazane okhiphe:
akwemukeleki, elikhulu, hleka ezingezona ezemvelo, ephendula hhayi kuphela ezihlekisayo, kodwa futhi amahlaya unfunny;
ngokuqhubekayo ngesikhathi ingxoxo ngokuthi uma ngengozi, siphathelene umuntu, umgwamanda noma izingubo amadoda, kuwukuziphulula isidumbu sakhe screwed ungene umunwe noma ipensela izinwele;
Ukhuluma izwi languid ngezwi ukudlala futhi nokufuna kugunyazwe ugqozi;
bayazidlalela yini, izindaba asihlobene ngokuphila kwakhe ubulili;
ukukhuluma imicu wesilisa, ukusebenzisa inhlamba.
owesifazane oluyinhlamba akusho ukuqaphela vulgarity yayo, becabanga ukuthi ukushayela ingxoxo ngesihloko trite, kuba ezithakazelisayo ukukhuluma.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi le ndoda -, ngaphezu kwakho konke, umzingeli nomnqobi ngubani uyozizwa inhlonipho iyatholakala kuzo zonke abesifazane.
Uba kanjani njengabesifazane kanye efiselekayo? izimfihlo zabesifazane
Isibalo amahle kakhulu emhlabeni: phezulu 5
Indlela tie tippet phezu elingenamikhono
Ngingaba ukubhukuda nge Tampon? sithola impendulo
Nobudlelwane bokuhlalisana: umnyombo futhi eziyisisekelo
Abasebenzisi Facebook ukudala yabo "izindaba bubble"
Syrup 'Stoptussin': yokusetshenziswa
Ingabe ikhabe avunyelwe ngesikhathi uncelisa?
"Yamaha" Synthesizer. Izinzuzo Umlando main
Indlela ukwelapha hemorrhoids?
Kuvele gel eliphumelelayo induna namaqhubu